Madaxweyne Xasan sheekh oo Maanta ku sii jeeda magaalada Baydhabo – GOBOLADA.COM
May 31, 2022 May 31, 2022 AbdukadirLeave a Comment on Madaxweyne Xasan sheekh oo Maanta ku sii jeeda magaalada Baydhabo
Madaxweynaha Dawlada Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu wadaa in maanta u bilaabato booqashooyin uu ku kala bixinayo degaanada dowlad goboleedyada, si uu latashi ugala sameeyo dhismaha dowladiisa cusub.
Madaxweyne Xasan sheikh Safarka ugu horeeya waxa uu maanta ku tagi doonaa magaalada Baydhabo, halkaasoo ay ka socoto qaban qaabada soo dhaweyntiisa, waxaana si Weyn loo adkeeyay Amaanka magaalada Baydhabo ee Xaruunta Gobolka Baay.
Ujeedka Safarka Maanta uu ku tagayo magaalada Baydhabo ayaa la sheegay in ay tahay in uu xariga ka jaro Dhismaha cusub ee Madaxtooyada KooFur Galbeed ee ee laga dhisay Magaalada baydhabo iyo in uu kulamo watashi ah halkaas uu kula yeesho Madaxweynaha Dawlada Goboleedka Koofur Galbeed Cabdi Casiis Xasan Maxamed Lafta gareen.
Hase ‘ahaatee’Waxaa shalay Magaalada Baydhabo gaaray islamarkaana lagu soo dhaweeyay wafdi uu hoggaaminayay Agaasimaha madaxtooyada Soomaaliya Xuseen Sheekh Maxamuud, wafdigiisa oo ay wehlinayaan xildhibaano iyo saraakiil ciidan hordhac u ah safarka madaxweynaha Dawlada Federaalka xasan sheikh maxamuud uu maanta ku tagayo Magaalada Baydhabo.
Daawo: Ergayga Gaarka ah ee Madaxweyne Xasan sheekh u qaabilsan Abaaraha oo baaq ka soo saaray Xaalad halis ah oo Soomaaliya ka Jirta .